ဘလောက်လိပ်စာ ပြောင်းလဲခြင်း - Open Engineering For Myanmar
Home » blogger » Custom domain » DNS setting » ကွန်ပျူတာ » ဘလူးဖီးနစ်
» ဘလောက်လိပ်စာ ပြောင်းလဲခြင်း
ကျွန်တော့် ဘလောက်လေးကို ဂူဂယ်က ဝယ်ထားပြီး Google App နဲ့ ညိနေလို့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ http://blog.engineer4myanmar.com ကို မလွှဲမရှောင်သာ အိမ်ပြောင်း နေခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ငှားဘ၀မှာ ဆင်းရဲစွာနေခဲ့ပြီးမှ အခု မူလလက်ဟောင်း လိပ်စာ လေး ဖြစ်တဲ့ http://www.engineer4myanmar.com ကို အောက်ပါ ဆက်တင်းများ အကူအညီနဲ့ ပြန်လည် ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာရောက် ဖတ်ရှုကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အရင်လိပ်စာဖြစ်တဲ့ http://www.engineer4myanmar.com ကိုပဲ ပြောင်းလဲ ဖတ်ရှုကြဖို့ အားနာနာနဲ့ ပဲ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့် ဘလောက်လေးကို လင့်ခ်များ ချိတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အား အားလပ်တဲ့ အချိန်ကျရင် လိပ်စာပြောင်းလဲ ရည်ညွှန်းပေးပါလို့ အနူးအညွှတ် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘလောက်ဂါ အတွက် DNS setting များDNS setting ထဲမှာ engineer4myanmar.com. 3600 IN A 64.202.189.170www.engineer4myanmar.com. 3600 IN CNAME ghs.google.com.
ဒီလိုလေးပဲ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံ ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါ။engineer4myanmar.com. 3600 IN A 64.233.179.121engineer4myanmar.com. 3600 IN A 66.249.81.121engineer4myanmar.com. 3600 IN A 72.14.207.121www.engineer4myanmar.com. 3600 IN CNAME ghs.google.com.
မှတ်ချက် ပုံမှန်အားဖြင့် DNS setting ထဲမှာ www.engineer4myanmar.com ကို ghs.google.com နဲ့ assign လုပ်ပေးပြီး TTL 3600 ထားပေးလိုက်ရင် အိုကေပေမယ့် ဒိုမိန်းနိမ်းကို ဂူဂယ်က ဝယ်ထားပြီး Google App နဲ့ အခန့်မသင့်လို့ ညိသွားရင် ပြဿနာ အကြီးအကျယ် တက်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာရင် Google blogger အတွက်ပေးထားတဲ့ server တွေရဲ့ IP address3ခုကို A records3ခု လုပ်ပြီး အထက်ပါ ဥပမာအတိုင်း assign လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် http://engineer4myanmar.com ကိုပါ http://www.engineer4myanmar.com ကို redirect လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ လိပ်စာ ၂ ခုလုံးနဲ့ ဝင်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်ကတော့ URL Redirection လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပါတယ်။ အထူးသတိထားရမှာက အဲဒီအဆင့်ကို DNS setting လုပ်ပြီးမှ သွားလုပ်မိရင် DNS setting တွေ ပျက်သွားတတ်တာပါပဲ။ အဲဒါလေးကို ပြန်စစ်ပြီး ပျက်သွားရင် ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။အကိုးအကားများhttp://blogging.nitecruzr.net/2008/06/custom-domain-publishing-and-google.htmlChuck [Blog*Star 2006 - 2008]Real Blogger Status: http://blogging.nitecruzr.net/